Vhidhiyo paMapeji Ekumhara anowedzera Shanduko ne130%
Kumhara Peji Mavhidhiyo Kuwedzera Shanduko 130%
Svondo, June 13, 2010 Svondo, July 27, 2014 Douglas Karr
Patove paine mamwe manhamba ekumanikidza vhidhiyo iyi inowedzera huwandu hwekushandurwa pamaemail ne200% kusvika 300%. Vhidhiyo iri kutanga kutamba chikamu chakakura munzira dzese dzekutengesa. Imavex ikambani yekuvandudza webhu inonzi imwe yeiyo pamusoro pekutsvaga injini yekushambadzira makambani Munyika.
Ini ndanga ndichitaura naRyan Mull uye akataura kuti ivo vaona shanduko inowoneka mumakasitoma avo ekubhadharira-pari-kudzvanya mitengo yekutendeuka pavanosanganisira emhando yepamusoro mavhidhiyo pane peji rekumhara.
Nhau dzakanaka ndedzekuti, iyo data yakajeka, uye iyo dhatabhesi yakakura zvakakwana kuratidza chaiko mhedzisiro. Nekuwedzera vhidhiyo kune SEM / PPC yekumhara peji, mutengi akaona 130.5% kuwedzera kwemitobvu inogadzirwa kubva kumushandirapamwe. pana Ryan Mull, Imavex
Imavex yakaburitsa vhidhiyo yekutambira chikuva, Streamotor, iyo yavari kushandisa kuitisa uye kushandira aya emhando yepamusoro mavhidhiyo.
Mutengo weiyo yakasanganiswa zvakanaka yewebhu-yakavakirwa mavhidhiyo inogona kusiana mumutengo Kune akatiwandei emuno mavhidhiyo zviwanikwa anogona kuita mavhidhiyo ezasi pe $ 1,000 2,500 imwe neimwe. Mamwe mavhidhiyo ehunyanzvi anogona kuita madhora zviuru mazana maviri nemazana mashanu zvichikwira - asi kana uri kuwedzera shanduko ne130%, hazvitore zvakawanda kuti uone kudzoka kwakanaka pane yekudyara!
Tags: conversion ratewedzera kutendeukakumhara pejipamapejiKushambadzira Vhidhiyomavhidhiyo ekushandura mitengo
WordPress 3.0 - Handigoni Kumirira!
Gara Uunza Hondo Yekumba
Jun 14, 2010 pa9: 01AM
Zvinosuruvarisa, asi ichokwadi kubva pane zvandakaona.
Kunyangwe saizi, kuenzana, uye kuiswa panzvimbo ino zvinoita mutsauko… kukanganisa, saka ndinoudzwa
Jun 14, 2010 pa 1: 12 PM
Iwe unogona kugovera zvimwe zve 'zvemuno vhidhiyo zviwanikwa' iwe zvaunotaura? Ndiri kutsvaga kuti ndiite vhidhiyo yakawanda isingakwanise kuwana vatengesi chaivo.
Jun 14, 2010 pa 2: 10 PM
Wow! Ndiani akaburitsa vhidhiyo iyi? Ndinoda kusangana navo. Mumwe munhu anogona kundizivisa?
Jun 15, 2010 pa10: 49AM
Pano muIndipolis, vhidhiyo zviwanikwa zviri Imavex (http://www.imavex.com), Cantaloupe (http://www.cantaloupe.tv), Chimwe Chakanaka Dhizaini
Nyeredzi Media (http://12starsmedia.com) munharaunda - ivo vese vanoita basa rakakura uye vanosiyana pamitengo uye chigadzirwa.
Gumiguru 20, 2014 na2: 50 PM
Ini ndinoshandira yeToronto-yakavakirwa yekutsanangura vhidhiyo agency inonzi LaunchSpark Vhidhiyo, uye isu takaona kuti kwete chete kuti vhidhiyo yakabatsira kuwedzera kutengesa kwevatengi vedu, asi yakashandawo sechishandiso chakakura chevano tungamira chizvarwa zano mune zvavo. Vazhinji vedu vatengi vakashandisa avo anotsanangudza mavhidhiyo pamabhizimusi ekuratidzira uye mharidzo zvakare, uye nekupa vateereri kukurumidza kuongorora kwavo chigadzirwa / sevhisi, zvakashandura avo vaoni kuva vatungamiriri. Iko kugona kuri nyore uye zvinobudirira kushandisa vhidhiyo mumatanho mazhinji ndechimwe chinhu chinoita kuti chive chikuru kushambadzira chishandiso!
Gumiguru 21, 2014 pa 2:04 AM
Makuru mavhidhiyo, Fabio!